Mitemo inoenderana neFPC inoshanduka wedunhu bhodhi - Pcb prototype, nhema, fekitori, mutengesi, mugadziri
IC Bvunzo YeBhodi
Yakakwira Speed PCB
» Blog » Mitemo inoenderana neFPC inoshanduka wedunhu bhodhi
Mitemo inoenderana neFPC inoshanduka wedunhu bhodhi
FPC inonyanya kushandiswa mune zvakawanda zvigadzirwa senge nhare mbozha, malaptop, PDAs, dijitari kamera, LCMS, nezvimwewo heano mamwe mazwi akajairika eiyo FPC.
1.Kupinda gomba (kuburikidza neburi, gomba repasi)
Iyo inowanzoreva kune yekuvharira (kuburikidza neburi kuti iteme chibhakera kutanga) pamusoro pebhodhi rinoshanduka, iro rinoshandiswa kukwana padunhu repamusoro pebhodhi inoshanduka seye anti welding firimu. Nekudaro, iyo gomba mhete gomba madziro kana mativi ekumonera padhi inodiwa pakuwisira inofanira kuve nemaune kuburitswa kuti ifambise iyo yekumisikidza zvikamu. Iyo inonzi “gomba rekupinda” pakutanga zvinoreva kuti pamusoro pevhu paine buri, kuitira kuti nyika yekunze igo “svikira” ndiro yakasungirirwa yeplate pasi pechiso chekudzivirira chepamusoro. Mamwe mabhodhi akawanda anewo maburi akafumurwa kudaro.
2. Acrylic acrylic
Inowanzozivikanwa se polyacrylic acid resin. Mazhinji mabhodhi anochinjika anoshandisa iyo firimu seye inotevera firimu.
3. Inonamira kana inonamira
Chinhu, senge resin kana kupfeka, iyo inogonesa nzvimbo mbiri kupedzisa kusunga.
4. Anchorage inoburitsa nzwara
Pane yepakati ndiro kana imwechete pani, kuitira kuti gomba rin’i rinotapira pad riwane kusimba kwakasimba pane ndiro pamusoro, zvigunwe zvakati wandei zvinogona kusungirirwa kune yakawandisa nzvimbo kunze kwegomba mhete kuita iyo gomba rin’i riwedzere kubatanidzwa, kuitira kuti udzikise mukana wekuyangarara kubva pamusoro peplate.
Seimwe yehunhu hwesimba rekuchinja bhodhi, semuenzaniso, mhando yebhodhi inochinjika yakabatana nemisoro yekudhinda yemakomputa dhisiki dhiraivha inosvika ku “kukotama bvunzo” yemabhirioni bhiriyoni.
6. Kubatanidza rukoko rwekubatanidza rukoko
Kazhinji inoreva kune yekunamatira yakaturikidzana pakati pemhangura pepa uye iyo polyimide (PI) substrate yeiyo firimu dura re multilayer bhodhi, kana TAB tepi, kana ndiro yeyakagadziriswa bhodhi.
7. Kavhara / jasi rekuvhara
Kune iro redunhu rekunze reiyo inochinjika bhodhi, pendi yakasvibirira inoshandiswa kune rakaomarara bhodhi haisi nyore kuti ishandiswe kune anti welding, nekuti inogona kudonha panguva yekukotama. Izvo zvinodikanwa kuti ushandise yakapfava “acrylic” dura rakanamirwa pabhodhi pamusoro, iyo isingagone chete kushandiswa seyeanopisa firimu, asiwo kuchengetedza dunhu rekunze, uye kusimudzira kuramba uye kugadzikana kwebhokisi rakapfava. Iyi yakasarudzika “firimu rekunze” inonyanya kunzi pamusoro pekudzivirira neta kana inodzivirira dura.
8. Dynamic flex (FPC) inochinja bhodhi
Iyo inoreva kune inochinjika redunhu bhodhi iyo inoda kushandiswa kune inoenderera kufamba, senge inochinjika bhodhi mune yekuverenga-nyora musoro wediski dhiraivha. Uye zvakare, kune “tuli FPC”, iyo inoreva kune inochinjika bhodhi iyo isingachaite mushure mekunge yaunganidzwa nemazvo.
9. Firimu inonamira
Icho chinoreva kune yakaoma yakaoma laminated yekubatanidza dhesiki, iyo inogona kusanganisira iyo firimu yekusimbisa fiber jira, kana iyo nhete nhete yezvinhu zvekunamatira pasina yekusimbisa zvinhu, senge iyo yekubatanidza rukoko rweFPC.
10.Flexible yakadhindwa redunhu, FPC inochinja bhodhi
Iri rakakosha redunhu bhodhi, iro rinogona kushandura chimiro chematatu-matatu nzvimbo panguva yekudzika kwegungano. Iyo substrate inochinja polyimide (PI) kana polyester (PE). Kufanana nebhodhi rakaomarara, iro rakapfava bhodhi rinogona kuita kufukidzwa kuburikidza nemakomba kana pamusoro pekunamatira mapedhi ekushandisa kuburikidza nekuisa gomba kana kumeso kwekuisa padenga. Iyo bhodhi yepamusoro inogona zvakare kusungirirwa neyakavharika chivharo chekudzivirira uye anti anti welding zvinangwa, kana kudhindwa neinopfava anti anti welding girini pendi.
11. Flexure kutadza
Izvo zvinhu (ndiro) yakatsemuka kana kukuvara nekuda kwekudzokorora kukombama uye kukombama, uko kunodaidzwa kushanduka kutadza.
12. Kapton polyamide nyoro zvinhu
Iri ndiro zita rekutengesa rezvigadzirwa zveDuPont. Iyo mhando ye “polyimide” jira inodzivirira yakapfava zvinhu. Mushure mekunamatira calendered mhangura foil kana electroplated mhangura foil, inogona kugadzirwa mune yepasi zvinhu zveyakagadziriswa ndiro (FPC).
13. Membrane switch
Iine yakajeka Mylar firimu semutakuri, sirivheri pasita (sirivheri peta kana sirivheri peta) inodhindwa pane gobvu firimu redunhu nenzira yekudhinda nzira, uyezve inosanganiswa negomba rakakomberedzwa uye rinotenderera paneri kana PCB kuita “bata” switch kana keyboard. Ichi chidiki “kiyi” chinowanzo shandiswa mumawoko akabatwa nemaoko, maduramazwi emagetsi, uye zvinodzora kure kweimwe midziyo yemumba. Inonzi “membrane switch”.
14. Polyester mafirimu
Inotaurwa sePET jira, chinojairika chigadzirwa cheDuPont ndeyeMylar mafirimu, chinova chinhu chine yakanaka magetsi kuramba. Mune redunhu bhodhi indasitiri, iyo inoonekera inodzivirira yakatetepa pane yekufungidzira yakaoma firimu pamusoro uye iyo solder chiratidzo chekuvhara pane iyo FPC pamusoro maPET mafirimu, uye iwo anogona zvakare kushandiswa seiyo substrate yesirivheri yekunamatira yakadhindwa firimu redunhu. Mune mamwe maindasitiri, iwo anogona zvakare kushandiswa seyakavharidzira tambo, tambo, macoil kana tubular kuchengetedza maICs akawanda.
15. Polyimide (PI) polyamide
Iyo yakanakisa resin inogadziriswa ne bismaleimide uye aromaticdiamine. Inozivikanwa se kerimid 601, chigadzirwa cheupfu chine nebwe chakatangwa nekambani yeFrance “Rhone Poulenc”. DuPont akaigadzira mucheka inonzi Kapton. Iyi pi ndiro ine yakanakisa kupisa kupisa uye kusagadzikana kwemagetsi. Haisi chete yakakosha mbishi zvinhu yeFPC netab, asiwo yakakosha ndiro yeuto rakaoma bhodhi uye supercomputer mamaboard. Iyo mainland dudziro yechinhu ichi “polyamide”.
16. Reel kudzoreredza basa rekubatanidza
Zvimwe zvemagetsi zvikamu uye zvigadzirwa zvinogona kugadzirwa neiyo yekudzosa uye yekudzosa maitiro ereel (disc), senge tebhu, lead furemu yeIC, mamwe anochinjika mabhodhi (FPC), nezvimwewo mukana wekudzosa uye kudzosa reel inogona kushandiswa pedzisa yavo yepamhepo otomatiki mashandiro, kuitira kuchengetedza nguva uye mutengo wevashandi weimwe chidimbu mashandiro.
Category Blog (666) Ruzivo Rwekambani (2) Zvigadzirwa (112) FR-4 pcb (21) HDI pcb (14) Yakakwira Speed PCB (5) IC Substrate (13) BGA (6) eMMc (1) Mini LED (2) SiP (1) IC Bvunzo YeBhodi (4) Microwave pcb (29) Yakakwira Frequency PCB (26) Rogers pcb (18) Taconic pcb (1) Telfon pcb (5) Multi-rukoko pcb (18) PcB Assembly (12) Hazvichinji-chinji Flex pcb (15) Yakakosha PCB (11)